Iindaba -Uhlalutyo kunye nenqanaba lentengiso yentengiso ye-wiring auto yaphesheya ngo-2021
Iimarike zezinto ezizenzekelayo zikhulu kakhulu, kwaye ixabiso lazo kwiimalike zehlabathi lifikelele kwi-378 yezigidigidi zeedola zaseMelika, ngenqanaba lokukhula lonyaka elimalunga ne-4%.
Zonke iintlobo zamalungu ezinto ezizenzekelayo, phakathi kwazo ezona zidume kakhulu ngamalungu azenzekelayo anokutshintsha. Ngenxa yokuba izithuthi zinxiba kwaye zikrazukile phantsi kokusetyenziswa kwendalo, kukho isidingo esikhulu kwezi mveliso kwintengiso:
Iindidi zolondolozo ezinje ngezihluzo, iziqhoboshi, amavili, ukumiswa, njl.
-Iindidi zombane ezinje ngeebhalbhu zebhalbhu, iinjini zokuqala, ezinye izinto, iimpompo zamafutha kunye nezitofu
Ukutshiza, ukunyuka kweenjini, ukunyuka kweemoto, ukulawula iingalo, ukudibanisa ibhola, ukudibanisa kunye nezinye izinto zokumisa, iinxalenye zerabha kunye neendidi zoomatshini
—Wiper blade kunye neziphatho zomnyango kunye nezinye iimveliso ezisetyenziswa ngaphakathi nangaphandle kwemoto.
Umzi mveliso weemoto lushishino lwehlabathi ngokwalo, kwaye iimveliso ezininzi zeemoto zithengisa ngaphezulu kwelizwe elinye okanye ingingqi. Nangona uphawu kunye nemodeli nganye inokuba negama elahlukileyo kumazwe ahlukeneyo nakwimimandla, ingaphakathi kunye neinjini ziya kwahluka. Kodwa ngokubanzi, iindawo ezininzi ziyahambelana kwaye zinokulungelelaniswa neemoto kumazwe ahlukeneyo nakwimimandla.
Nangona kunjalo, ngokuthetha ngokubanzi, inethiwekhi yomthengisi ebonelela ngamalungu okuzenzekelayo ihlala ikhethekile kwilizwe ngalinye nakwingingqi nganye, enokuthi ikhokelele kumahluko omkhulu kumaxabiso kwintengiso enqamlezayo yomda wamalungu ezithuthi. Nangona kunjalo, iindawo ezinexabiso eliphezulu okanye ekunzima ukuzifumana kunye nezinto ezenziwe kubathengi baphesheya baneemfuno ezinamandla zamalungu ezithuthi. Indawo yentengiso ephezulu eMbindi Mpuma "igcwele amandla", kunye neemarike eMpuma Yurophu, eRashiya, eAustra.